Fiahiana ireo ankizy “autistes”: maro ny tranga tsy manaja ny zo maha olona - ewa.mg
News - Fiahiana ireo ankizy “autistes”: maro ny tranga tsy manaja ny zo maha olona
Maro ny tranga izay tsy manaja ny zo mahaolombelona ny ankizy «autistes » sy ireo ray aman-dreniny. Nisongadina izany tamin’ny iraka nataon’ny Dr Pierre Sans, manampahaizana momba ny fahasalaman’ny saina, teto amintsika, ny 6 hatramin’ny 24 jolay teo, niaraka tamin’ny mpilatsaka an-tsitrapo avy amin’ny Autisme Madagascar.
Tafiditra ao anatin’ny tetikasa « Opération Blue » ity iraka, natao teto Analamanga sy tany Atsinanana ary Analanjirofo, ity. Votoatin’ny tetikasa ny hanao fitiliana maimaimpoana ny « autisme » eto amintsika, rehefa tsapa fa olana ny tsy fahafahan’ny ray aman-dreny manao izany, rehefa mahita fa manana olana amin’ny fahasalamana ara-tsaina ny zanany.
Miisa 22 ny ankizy vita « diagnostics » teto Analamanga, 11 tany Toamasina ary 9 tany Fenoarivo Atsinanana. Nandritra ireo asa ireo, tsapan’ny Dr Pierre Sans sy ny ekipa niaraka taminy fa betsaka ny “diagnostics” tsy marina sy ny fanafody tsy mifanaraka amin’ny aretina manjo ilay zaza na koa mihoatra ny tokony ho izy. Tsy vitsy koa ny fitsirihana ara-pahasalamana na “examens médicaux” tsy mifanaraka sy mihoatra ny tokony ho izy, toy ny fanaovana “scanners” sy “EEG”.
Tsy ireo ihany fa hitan’ity mpitsabo ity koa ny tsy fahampian’ny fanaraha-maso ny fanafody homena ny zaza sy ny tsy fahampian’ny fanazavana homena ny ray aman-dreny. Manampy ireo ny fanomezan-tsiny ny ray aman-dreny ataon’ny mpiasan’ny fahasalamana. Nohamafisin’ny Dr Pierre Sans fa vao mainka sakana amin’ny fandraisana an-tanana ny zaza “autistes” ireo rehetra ireo.
Manoloana ireo, nanolotra vahaolana ny Autisme Madagascar, hanatsarana ny fandraisana an-tanana ireo zaza “autistes”. Anisan’izany ny fanaovana fanadihadiana manerana ny Nosy momba ireo tranga fanaovana tsinontsinona ireo olona sembana ara-tsaina na manana fikorontanana eo amin’ny fihetsika. Tokony harahina fepetra avy hatrany izy ireny.
L’article Fiahiana ireo ankizy “autistes”: maro ny tranga tsy manaja ny zo maha olona a été récupéré chez Newsmada.
“Nanapa-kevitra hiroso amin’ny fifidianana loholona ny fitondram-panjakana. Satria izay no voalazan’ny lalàna, fa tsy hoe manao didy jadona hanao fifidianana loholona ny fitondrana. Tapitra amin’ny 2 febroary 2021 ny fe-potoam-piasan’ny loholona, ankehitriny. Zava-misy izay fa tsy hoe foronin’ny fitondram-panjakana”, hoy ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina sady mpitondra tenin’ny governemanta, i Lalatiana Rakotondrazafy Andriatongarivo. Tsy maintsy atomboka dieny izao ny dingana fanatanterahana ny fifidianana fa tsy hoe tapitra ny fe-potoam-piasan’ireo loholona fa vao hojerena izany. Rehefa tonga ny 2 febroary 2021, efa tokony hanana loholona vaovao i Madagasikara.Ho toy ny tamin’ny 2015 ny fifidiananaAmin’ny 11 desambra ny fifidianana loholona. Adihevitra ny hoe tsy feno ny mpifidy vaventy fa tsy mbola natao ny fifidianam-paritra, araka ny lalàna. Toy izany koa ny amin’ny olom-boafidy eo anivon’ny faritany. “Tsy nisy anefa izany tamin’ny fifidianana loholona tamin’ny 2015, fa natao ihany ny fifidianana loholona”, hoy izy.Eo koa ny tsy fahafenoan’ny mpifidy vaventy toy ny ben’ny Tanàna, mbola manao fangatahana fandravana didy eo anivon’ny Filankevi-panjakana. Ny didim-panjakana noraisin’ny filankevitry ny minisitra: iray volana mialoha ny fifidianana, ny 11 novambra, vao mikatona ny lisitry ny mpifidy amin’io fifidianana io.Raha amin’izao no misy ben’ny Tanàna manao fangatahana eny anivon’ny Filankevi-panjakana, efa milamina izany amin’ny 11 novambra.R.Nd.L’article Minisitra Lalatiana A. : “Tsy manao jadona isika” a été récupéré chez Newsmada.
Norbert Lala Ratsirahonana : “Ara-dalàna ny fifidianana na iza tsy hanao”
“Izao no zavatra lazaiko amin’izay milaza fa tsy handray anjara amin’ny fifidianana loholona. Amin’ny didy fakan-tahaka manerana an’izao tontolo izao, na hanao ny tena na tsy hanao: rehefa mandeha ny fifidianana, izay mandray anjara eo no manao azy.”Io ny fanehoan-kevitry ny mpahay lalàna efa filoham-panjakana teo aloha, i Norbert Lala Ratsirahonana, manoloana tsy fandraisana anjaran’ny mpanohitra amin’ny fifidianana loholona hatao amin’ny 11 desambra ho avy izao. Tsy misy hoe tsy ara-dalàna io fifidianana io, satria tsy mandray anjara ny tena.Izay ny didy fakan-tahaka. Raha tsy mandray anjara ny tena, tsy mandray anjara izany fa ny hafa mandray anjara. Tsy eto Madagasikara ihany izay fa didy fakan-tahaka manerana an’izao tontolo izao. Rehefa mandeha ny fifidianana: manao izay mandray anjara, tsy manao izay tsy mandray anjara.Diso adiresy ireo loholonaTsy any amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) izay no tokony handefasana ny fitoriana ny hoe tsy maha ara-dalàna io fifidianana loholona io. Na amin’ny fomba ahoana na ahoana, fanapahan-kevitry ny governemanta iny. Tsy misy afa-mandrava ny didim-panjakana fihaikana mpifidy, na ny Filankevi-panjakana na ny HCC. Izay ny lalàna sy ny zava-misy. Tsy misy fanemorana indray ny fihaikana ny mpifidy amin’ny fifidianana izany.R.Nd.L’article Norbert Lala Ratsirahonana : “Ara-dalàna ny fifidianana na iza tsy hanao” a été récupéré chez Newsmada.
Hisokatra amin’ny 23 septambra ka hatramin’ny 27 septambra ho avy izao any Pretoria (Afrika Atsimo) ny fampiofanana momba ny fanatsarana ny fitantanam-bola sy ny fiatraikan’ny fahaiza-mitantana eo amin’ny lafiny tetibola. Hisolo tena ny fanjakana malagasy amin’izany ny minisitry ny Vola sy ny Tetibola ka tanjona kendrena ny hahafahana mahazo traikefa mba hoentina manatsara ny fomba fitantanana ny volam-panjakana sy hisian’ny vokatra mivaingana amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina. L’article Fitantananam-bola est apparu en premier sur AoRaha.
HAZAKAZA-PIARAKODIA – RUN :: Voahosotra ho tompondaka fanindiminy i Vazaha
Nivoaka ny didy. Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara fanindiminy teo amin’ny hazakaza-piarakodia sokajy ProRun i Jean de Dieu Rafanomezantsoa na i Vazaha, mpanamory Subaru Impreza. Io no fanapahan-kevitra noraisin’ny mpanara-maso ny fifaninanana eo anivon’ ny Federasiona malagasin’ ny hazakaza-piarakodia, taorian’ny tsy nahavitan’ny dingana farany ho an’ny fifaninanam-pirenena tamin’ny 2 desambra lasa teo noho ny fiavian’ny orana tampoka. Talohan’io dingana fahenina io dia nanana isa 112 i Vazaha, raha 103 ny an’i Jaona Randriarimalala na i Jaona Elite, nanamory Smart Dragster. Samy nojerena ny isa azon’ny tsirairay, teo amin’ny fitsaharan’ny fifa-ninanana vokatry ny orana tamin’ny 2 desambra lasa teo ka nahazo fanampin’isa 25 i Vazaha niampy isa telo ka tafakatra ho 140. Nandritra ny dimy taona nisesy (2014 – 2018) dia voahosotra foana izy. Teo amin’ny sokajy Run indray dia voahosotra ho tompondaka i Tony Razafintsalama, nitondra ny Renault Super 5. Azony avokoa ny laharana voalohany tamin’ireo dingana rehetra nanamarika ny fifaninanam-pirenena tamin’ity taona ity. L’article HAZAKAZA-PIARAKODIA – RUN :: Voahosotra ho tompondaka fanindiminy i Vazaha est apparu en premier sur AoRaha.
Tenisy – Roland Garros: norombahin’i Nadal fanin-13 ny amboara
Nifarana ny alahady lasa teo, tany Frantsa ny Roland Garros, taranja tenisy. Nisongadina ilay espaniola, i Rafael Nadal, izay nandrombaka fanin-13 ity “Internationaux de France”, ity. Fanin-20 kosa ny nahazoany ny “Grand chelem”. Raha tsiahivina, resiny teo amin’ny famaranana, tamin’ny seta 3 no ho 0 (6/0 ; 6/2 ; 7/5) ilay Serbe i Novak Djokovic. Tsy mbola nisy toa ity vokatra azon’i Nadal ity, hatramin’izay, teo amin’ny Roland Garros. Mitovy amin’ny zava-bitan’ilay Soisa, i Roger Federer izany izao ity azon’i Rafael Nadal ity. Samy nandrombaka in-20 ny “Grand chelem”, izy mirahalahy ireo. Mijanona eo amin’ny 17 kosa ny an’i Djokovic. Marihina fa efa 34 taona i Nadal amin’izao fotoana izao.Teo amin’ny vehivavy indray, lasan’ilay Polonezy, i Iga Swiatek ny fandresena rehefa nandresy ilay Amerikanina, i Sofia Kenin, tamin’ny seta 2 no ho 0 (6-4 ; 6-1) izy. Ho an’ny olon-droa miaraka lehilahy dia i Krawiets sy i Mies ny nandrombaka ny amboara raha i Kristina Mladenovic sy i Timea Babos kosa teo amin’ny vehivavy.Tompondaka L’article Tenisy – Roland Garros: norombahin’i Nadal fanin-13 ny amboara a été récupéré chez Newsmada.
Mpanjifa telo mirahalahy ny alefan’ny Orange Madagascar hijery ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja baolina kitra (Can 2019), any Egypta. Taorian’ireo fifaninanana mahakasika ity fifaninanana ity nokarakarainy ny nahazoana izany. Natolotry ny tale jeneralin’ny Orange Madagascar, i Michel Degland, omaly tetsy Ankorondrano, ho an’ireo mpandresy, ny tapakila handehanany hiatrika izany. Nanotrona izany ny solontenan’ny minisitry ny Serasera, Rakotondrazafy Lalatiana.Raha tsiahivina, anisan’ireo nahazo izany Ralaivao Fety Harimanana, nahazo ny loka teo amin’ny fakana ny sarin’ny mpanohana na ny “Fan Of my country”. Teo koa Ramarosandy Marline Zosahaza, nahay nitantara, tamin’ny fandraisam-peo, ireo baolina mendrika tafiditra nandritra ny Can, tany aloha, na “Best of commentator”.Hanainga, rahampitso alarobia, izy mirahalahy ireo, ary hipetraka amin’ny hotely kintana efatra, ny 27 – 30 jona ho avy izao. Hanatrika ny lalao hifandonan’ny Barea sy i Borondi izy ireo.Mpandresy fahatelo Ralainaivo Herilanto Mamitiana Rayan, nandrombaka ny amboara tamin’ny “Tournoi national Orange Esport Experience» sy teo amin’ny «Tournoi PES 2019», natao ny asabotsy 15 jona. Ny 16 jolay ho avy izao izy no handeha ary hiatrika ny famaranana ny “Panafricaine Orange Esport Experience”, hatao ny 17 sy 18 jolay ho avy izao. Hijery ny famaranana ny “Can 2019” kosa izy. Hisy ny fiaraha-miasa eo amin’ny ORTM amin’ny fandefasana ny lalaon’ny Barea, eny Mahamasina sy eny Soarano ary any amin’ny faritra maro.Ankoatra izay, hisy ny “Tournoi Orange kitra”, ho an’ireo ekipam-pokontany 24, hatao etsy Mahamasina, isaky ny asabotsy sy ny alahady. Fihaonana efa nanomboka ny 22 jona lasa teo. TorcelinL’article Orange Madagascar: olona telo alefany hijery ny «Can 2019» a été récupéré chez Newsmada.
Boriborintany II: kandidà depiote Rabenandrasana
Nampahafantatra ny maha kandidà azy, ao amin’ny boriborintany II, amin’ny fifidianana depiote, omaly teny Ambohipo, Rabenandrasana Lalao François. Mpikambana ao amin’ny Akademia malagasy (sampana haifiaina sy fitondra), mpanoratra, mpikabary ary mpandala ny fomba amam-panao malagasy ny tena ahafantarana azy. Nambarany fa natosiky ny fitiavan-tanindrazana hanompo vahoaka ny tenany ka nanapa-kevitra ny ho kandidà depiote amin’ny anaran’ny tsy miankina. « Tsy mpanao lalana na fotodrafitrasa samihafa ny depiote, izay mitaky olona vonona hanolotra ny fahendreny sy mahafantatra ny zavatra tadiavin’ny vahoaka ka vonona hisolo vava azy eny amin’ny Antenimierampirenena, ary hamadika izany ho lalàna », hoy ny kandidà Rabenandrasana Lalao.Lafim-piainana fito, mahakasika ny fiarahamonina, no hitan’ity kandidà ity fa mila asa goavana avy amin’ny fitondram-panjakana. Misongadina amin’izany ny famohazana indray ny kolontsaina sy ny soatoavina malagasy. « Mora mirodana ny firenena tsy manandratra ny kolontsainy… Manjaka amin’izao fotoana izao ny fanolanana sy ny herisetra feno habibiana…», hoy Rabenandrasana Lalao. Izany tranga rehetra izany, porofon’ny tsy fanajana intsony ireo soatoavina sy kolontsaina maha Malagasy antsika.Ankoatra ireo, hifantoka amin’ny fitondrana ny hetahetan’ny vahoaka momba ny tontolon’ny asa sy ny karama mendrika, ny fananan-tany sy ny trano sahaza ny maha olona, ny fandriampahalemana, ny tontolo iainana mirindra, ny fanabeazana maimaimpoana ary ny fanamorana ny fahafahan’ny Malagasy miahy ny fahasalamany sy mitsabo tena ny vaindohan-draharahan’ny kandidà Rabenandrasana Lalao.Randria. L’article Boriborintany II: kandidà depiote Rabenandrasana a été récupéré chez Newsmada.
Antananarivo-Renivohitra: mitobaka ny fako, tsy hita ihany izay kamiaon’ny Samva
Efa ho roa herinandro izao no nanaovana resabe ny fahazoan’ny Samva ny kamiao be 16 hitaterana ny fakon’Antananarivo. Hatramin’izao, tsy mbola hita mihaodihaody izany. Mivangongo ny fako, manapaka lalana mihitsy izany amin’ny toerana sasany. Maimbo ny tanàna, sempotry ny loto sy ny fofona ratsy ny mponina. Nolazaina tany aloha fa ny tsy fahampian’ny kamiao miasa hitatitra fako no olana tsy hahafahana maka ny fako mitoby amin’ireo dabam-pako maro eto Antananarivo. Efa misy anefa ireo kamiao lehibe ireo, saingy toa malaza tsy hihinanana. Nilaza ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Ravalomanana Lalao, omaly fa noho ny antony ara-taratasy tsy mbola tomombana no tsy hahafahan’ireo kamiaobe miasa araka ny resaka nifanaovany tamin’ny minisitry ny rano. Andraikitry ny Samva no manala ny fako eto Antananarivo. Raha ny rafitra, mifandray mivantana amin’ny minisiteran’ny rano ny Samva fa tsy miankina amin’ny kaominina velively. Miteraka loza ara-pahasalamana ho an’ny mponina ny tsy fandraisana andraikitry ny Samva amin’ny tsy fandraofana ny fako. Mizaka ny fanomezan-tsiny avy amin’ny vahoaka ny kaominina amin’ny tsy fahaiza-miasan’ny Samva. Tokony hazavaina ny antony tsy hahafahan’ny Samva manao ny asany fa tsy manempoka fotsiny toy izao, hoy ny avy ao amin’ny CUA. Ny kaominina rahateo mandoa ny “redevance sur les ordures menagères (Rom) ho an’ny Samva tsy tapaka. Efa loza mihatra ho an’ny mponin’Antananarivo ny fitobian’ny fako amin’izao fotoana indrindra ao anatin’izao vanim-potoan’ny fahavaratra izao. Entin’ny riaka any anaty lakandrano ny fako ka manentsina izany ary mitarika ny fiakaran’ny rano rehefa mikija ny orana. Tatiana AL’article Antananarivo-Renivohitra: mitobaka ny fako, tsy hita ihany izay kamiaon’ny Samva a été récupéré chez Newsmada.
Ho avy ny fotoam-pahavaratra: nandray kifafa nanadio ireo faritra dibo-drano ny Tafika
Hitsinjovana sahady ny fahasahiranan’ireo mponina sy ireo mpivarotra eny amin’ny fokontany Besarety, Anjanahary ary Mahavoky, izay toerana dibo-drano rehefa fotoam-pahavaratra dia miezaka misoroka izany ny teo anivon’ny Tafika Malagasy. Nisy, araka izany, ny fidinana ifotony tamin’ny alalan’ny fanadiovana teny amin’ireo faritra ireo sady nanentanana ny mponina hanadio ny manodidina azy. Ho fanomezan-tanana ireo mponina, nidina teny amin’ireo fokontany ireo ny miaramila avy ao amin’ny vondron-tafika mitoby eny Ampahibe (CPC, 1°RG, RAS ary R3A), omaly, notarihin’ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika an-tanety, ny Jly Rakotoniaina Jean Aimée, niaraka tamin’ireo lehiben’ny Rezimanta tsirairay efatra avy. Nodiovin’ny miaramila avokoa ireo toerana mety hiangonan’ny fako toy ny lakandrano, lalan-kely, ny tsena ary namendrahana ranom-panafody ihany koa ireo toerana maro, isan’izany ny trano fidiovana ary ny sekoly eny an-toerana. Tsy vitan’izay fa mbola notolorana fitaovana fanondrahana fanafody miisa 10 miaraka amin’ny ranom-panafody koa ireo fokontany ireo mba hanohizan’izy ireo ny fisorohana amin’ny valanaretina.Jean ClaudeL’article Ho avy ny fotoam-pahavaratra: nandray kifafa nanadio ireo faritra dibo-drano ny Tafika a été récupéré chez Newsmada.
Andro iadiana amin’ny lefakozatra : tokony hotohizana ny fanaovam-baksiny faobe
Efa afaka tamin’ny valanaretina lefakozatra i Ma­da­ga­sikara, araka ny fanamarinana nomen’ny Sampan­dra­ha­rahan’ny Firenena mikambana (OMS), ny taona 2018, noho ny ezaka nataon’ny fi­ton­drana sy ny mpiray om­bon’antoka tamin’ny fanaovam-baksiny faobe nandritra ny taona maro. “Mbola ahitana ny “poliomyélite sauvage” kosa any Pakistan sy eny Afghanistan ka tokony mbola hitandrina hatrany ny rehetra ka hanohy ny fanaovam-baksiny miaro ny ankizy”, hoy ny mpikambana ao amin’ny Ro­tary. Mitaky volabe ny fividianana vaksiny sy ny fanetsehana ny mpiasa manao vaksiny amin’ny toerana maro, indrindra any amin’ny faritra lavitra. Mpiray ombon’antoka lehibe manampy amin’ny vola ampiasaina amin’ny fanaovam-baksiny miaro amin’ny lefakozatra ny fikambanana Rotary maneran-tany. Miara-mikarakara hetsika hanamarihana ny Andro maneran-tany iadiana amin’ny aretina lefakozatra, anio eny amin’ny Parvis Analakely, ny minisiteran’ny Fahasalamana sy ny Ro­tary mandritra ny tontolo andro. Fandraisana ny tolo-tanana amin’ireo rehetra na­saina sy ireo malala-tanana ton­ga eny an-toerana no ho­tontosaina. Misy koa fampahafantarana ny ezaka vita vo­katry ny fifarimbonan’ny so­jakin’olona sy ny sampandraharaha maro.Vonjy A.L’article Andro iadiana amin’ny lefakozatra : tokony hotohizana ny fanaovam-baksiny faobe a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa: hanome vatsim-pianarana ry zareo Bengalis
Hiompana kokoa eo amin’ny fampianarana sy ny fanabeazana. Nihaona tamin’ny ambasadaoron’i Madagasikara atsy Maorisy, ny Jly Camille Vital, ny ambasadaoro ny Repoblika entim-bahoakan’i Bangladesh, tamin’ity herinandro ity. Notanterahina tany Nosy Maorisy izany fihaonana izany. Samy miasa sy monina ao an-toerana ny roa tonta. Voaresaky ny andaniny sy ankilany ny fiaraha-miasa eo amin’i Madagasikara sy i Bangladesh. Anisan’izany ny hitondrana fampandrosoana amin’ny sehatra maromaro. Tafiditra ao anatin’izany ny lafiny fanomezana fiofanana ho an’ny mpampianatra. Eo koa fanoloran’izy ireo vatsim-pianarana ho an’ireo mpianatra ho mpitsabo eto amintsika. Manampy izany ny momba nyfiaraha-miasa eo amin’ny indostrian’ny fanenoman-damba, anisan’ny manavanana ny any Bangladesh ary mampivoatra ny toekaren’izy ireo.Tsiahivina fa any Azia ity firenena ity ary mifanolo-bodirindrina amin’i Birmania sy ny any Inde.Synèse R. L’article Fiaraha-miasa: hanome vatsim-pianarana ry zareo Bengalis a été récupéré chez Newsmada.
Hetsika RF2 sy ny Himo: nodiovina ny lakandrano hiatrehana ny fahavaratra
Mitohy ny asa fanadiovana eny anivon’ny fokontany, tanterahin’ny CUA ho fitsinjovana ny mponina sy ny tanàna, mialoha ny fahavaratra. Notanterahina tamin’ny alalan’ny asa tana-maro (Himo) miaraka amin’ny RF2 ny dingana voalohany, natao amin’ny fokontany IIIG Hangar sy ny eny Amboditsiry ary Manarintsoa Isotry. Nodiovina tamin’izany ny lakan-drano sy ny tatatra ary ireo faritra feno loto. Hifarana ny 31 oktobra izao izany raha nanomboka ny 21 oktobra teo. Hitohy amin’ny fokontany hafa, Andranomanalina Centre, Anatihazo Isotry, Anjezika II, AntetezanafovoanyII ary 67 ha Avaratra Atsinanana ny hetsika.Tafiditra indrindra ao anatin’ny PIAA “Projet Intégré d’Assainissement d’Antananarivo “ sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny “Positive Planète” izao tetikasa izao.Etsy an-daniny, nanomboka omaly koa ny fampiofanana ireo RF2 momba ny teknika amin’ny fanentanana momba ny fehezam-pitsipika mikasika ny fikolompahasalamana (CMH). Notanterahina tetsy amin’ny BMH Isotry izany ka miisa 61 ny fitambaran’ireo fokontany anaovan’ny “Positive Planète” ny tetikasa fanadiovana.Synèse R.L’article Hetsika RF2 sy ny Himo: nodiovina ny lakandrano hiatrehana ny fahavaratra a été récupéré chez Newsmada.